विज्ञापन | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
लाउड ब्रान्ड नाम: मूल्याङ्कन। लोकप्रिय ब्रान्डहरू र तिनीहरूको लोगोहरू
आज, प्रसिद्ध ब्रान्ड नामहरू सबैको ओठमा छन्। हामी उनीहरूको बानी हुन्छौं र यस्तो लाग्दैन कि कसैले यी नामहरू एक पटक आविष्कार गरे कि तिनीहरू पछाडि छन् ...
रोनाल्ड म्याकडोनाल्ड - म्याकडोनाल्डको शुभंकर
रोनाल्ड म्याकडोनाल्ड को हो? यो एक जोकर हो जो विश्व प्रसिद्ध म्याकडोनाल्ड कम्पनीको शुभंकर हो। २००१ मा "फास्ट फूड नेशन" पुस्तकका लेखकहरूद्वारा गरिएको अनुसन्धान अनुसार रोनाल्ड म्याकडोनाल्ड (तलको फोटो हेर्नुहोस्) धेरै छ ...
अन्य प्रकारको विज्ञापनमा अनलाइन विज्ञापनका फाइदाहरू
हरेक दिन मानिसहरू आफ्नो काम र जीवन मुद्दाहरू समाधान गर्न इन्टरनेटमा धेरै घण्टा खर्च गर्दछ। दर्शक निरन्तर बढ्दै छ, दुवैात्मक र गुणात्मक: किशोर, युवा, परिपक्व व्यक्तिहरू उच्च आय भएका ...
OBEY: यो ब्रान्ड के हो र यसको सिर्जनाको ईतिहास के हो?
तपाईं जहिले भीडबाट अलग हुन चाहनुहुन्छ। मौसम र विन्डोज बाहिर मौसम जस्तोसुकै, त्यहाँ स्टाइलिश हेर्नको लागि इच्छा छ। एकै साथ, मँ लुगा र सामान मात्र चाहान्छु ...
ग्राफिक डिजाइनर को हो?
डिजाईन हाम्रो देशमा सबैभन्दा लोकप्रिय उद्योगहरू मध्ये एक हो। जसले आफूलाई आफूलाई एक डिजाइनर भन्छन्: गम्भीर वेबसाइट विकासकर्ताहरूबाट साधारण मैनीक्योर मास्टरहरू सम्म। यद्यपि, सबैभन्दा धेरै ...
गुणवत्ता उच्च बनावटी मुद्रण
नयाँ प्रिन्टि technologies टेक्नोलोजीहरूको आगमनले प्रिन्टको गुणस्तर सुधार गर्दछ र तिनीहरूको अनुप्रयोगको क्षेत्र विस्तार गर्दछ। ती मध्ये, उदात्त मुद्रण बाहिर देखिन्छ, को सार बाट उत्पादहरु को लागी एक छवि लागू गर्नु हो ...
SAMP को PR सर्भर: छिटो र कुशलतापूर्वक
सबै नौसिखिए सर्भर प्रशासकहरूले चाँडै वा पछि यस प्रश्नमा रुचि राख्न थाल्छन्: "GTA सर्भर कसरी प्रवर्धन गर्ने: SAMP?" SAMP सर्वर को PR सशर्त दुई प्रकारहरु मा विभाजित गर्न सकिन्छ। पहिलो, यो सरल हो, - ...
फोटोशपमा पोस्टर कसरी बनाउने र आफैलाई गरौं
फोटोशपमा कसरी पोस्टर बनाउने वा यसलाई आफै गर्ने? तपाईंले कुन विधि प्रयोग गर्नु पर्छ? हामी दुबै विकल्पहरूलाई विस्तृत रूपमा विचार गर्नेछौं, र सबैजनाले उसलाई उपयुक्त छनौट गर्न सक्दछन्। अक्सर फोटोशपमा कसरी पोस्टर बनाउने ...
उडानहरूको सफलताले के निर्धारण गर्छ? फ्लाई आकार, डिजाइन, ट्र्याकिङ
आज यो सडकमा हिंड्न गाह्रो छ र मेट्रोको नजिक उभिरहेको व्यक्तिको हातबाट तपाइँलाई सूचना पुस्तिका लिनको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। यो सामान्य बन्न गयो - घर फर्केर, उदाहरणका लागि, संग ...
लोगोको इतिहास। लोगो "बीएमडब्ल्यू", "स्कोडा", "अडी", "टोयोटा", "एडिडास": क्या सिर्जनाको इतिहास हो
तपाईंले स्वीकार गर्नै पर्छ कि ब्रान्डको विश्वमा त्यहाँ धेरै थोरै लोगोहरू छन् जुन सबैले चिन्ने छन्, र colorful्गीन टिभी विज्ञापनहरू वा शहरका सडकहरूमा झुन्डिएका रंगीन विज्ञापन पोस्टरहरूको लागि धन्यवाद चिन्न सकिन्छ। "लोगो" को इतिहास कसरी सुरु भयो ...
सीपीएम - यो के हो? सीपीएम विज्ञापनमा कसरी प्रयोग हुन्छ?
नेटवर्कमा प्रदर्शन वा प्रासंगिक विज्ञापन अभियानको आयोजना गर्दा, कुनै पनि विज्ञापनदाताले यसको अनुमानित बजेट गणना गर्दछ। विज्ञापन अभियानका ग्राहकका लागि यो महत्वपूर्ण छ कि यसको कार्यान्वयनको लागि रकम कसरी वितरण गरिन्छ, उनीहरू उद्देश्य अनुसार खर्च गरिन्छ कि गर्दैनन्।
विज्ञापन पत्रकहरूको राम्रो उदाहरण कसरी सिर्जना गर्ने। नियम र सुझावहरू
फ्लायर एक उत्पादन वा सेवा प्रबर्धन गर्न सस्तो र अत्यधिक प्रभावकारी तरिकाहरू मध्ये एक हो। यसले दुबै विज्ञापन र उपभोक्ताका लागि सूचनात्मक कार्यहरू गर्दछ। र यदि त्यहाँ पदोन्नति को आवश्यकता छ ...
DIY एलईडी चलिरहेको लाइन: बनाउन को लागि एक गाइड
यदि तपाईं राम्ररी हेर्नुभयो भने, त्यहाँ वरिपरि धेरै र colorful्गीन चलिरहेका विज्ञापनहरू छन्। यो भवनहरू, बिलबोर्डहरू, अफिस विन्डोजहरू र क्याफेहरूमा स्थापना गरिएको छ र केहीले यसलाई कार विन्डोजमा सिधा माउन्ट गर्दछ। यो सबै निर्भर गर्दछ ...
लोगो: प्रकारका लोगोहरू। कम्पनी लोगो लोगो सिर्जना
कुनै पनि कम्पनीको गतिविधि कर्पोरेट पहिचानको सिर्जनासँग सुरू हुन्छ, जसका मुख्य अवयवहरू लोगोको विकास समावेश गर्दछ। यो प्रतीक हो जुन विशेष उद्यमको उत्पादन वा सेवाको स्वामित्व दर्साउँदछ, यसको अवधारणा प्रदर्शित गर्दछ र ...
कस्ता प्रकारका विज्ञापनहरू छन्
सफलतापूर्वक तपाईको ब्यापारको विकास गर्न, यो व्यापार होस्, बिभिन्न सेवाहरू वा अरू केहि, तपाइँले यसलाई सब भन्दा पहिले यसलाई बढावा दिनुपर्दछ, यसलाई चिन्न योग्य बनाउनुहोस्। र विज्ञापनले यस विषयमा ठूलो भूमिका खेल्छ। यो उनी थियो ...
आजकल विज्ञापन दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा भएको छ। उनी हामीलाई जताततै साथ दिन्छन्: काम गर्ने बाटोमा, शहर वरिपरि हिंड्दा, यातायातमा, टिभी स्क्रीनहरूमा। एक प्रकारको विज्ञापन, ...
उपसर्ग "प्रोमो" अब दृढतापूर्वक आधुनिक व्यक्तिको दैनिक जीवनमा स्थापित भएको छ। सबै पक्षबाट हामी लगातार "प्रोमो-एक्शन", "प्रोमो-कपडाहरू", "प्रोमो-साइटहरू", "प्रोमो-स्मृति चिन्ह", "प्रोमो-भिडियो", "प्रोमो-कोडहरू" सुन्छौं - यो सूची जारी रहन्छ।
तह - यो के हो? केही जानकारी
"तह" को अवधारणा जर्मन भाषाबाट आएको हो, अनुवादमा "फोल्ड" शब्दको अर्थ "ग्रूव", "ग्रूव" हो। अवधारणाले कुनै परिवर्तन बिना हाम्रो भाषामा जरा लिएको छ। फोल्डि sheet पाना प्रकाशनको निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ, उदाहरणका लागि बुकलेट्स, ...
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,539 प्रश्नहरू।